AC Filter Capacitor Mpanamboatra sy mpamatsy - China AC Filter Capacitor Factory
avo azo antoka oval sarimihetsika capacitor ho an'ny X-ray milina
Fahazakana fandeferana: -5% ~ + 5%
Frequency nahazo naoty: 50 Hz sy/na 60 Hz
Volavolan'ny laharana: 660 VAC
Ny mari-pana ambony indrindra: -40 ℃ hatramin'ny + 70 ℃
Fitaovana dielectric: sarimihetsika polypropylène metaly
AC sivana kapasitor （AKMJ-S）
Ny CRE dia namolavola ity sivana AC karazana maina ity izay namaha ny olan'ny tsy fahombiazan'ny sivana AC mahazatra.
1. Trano tsy misy vy lehibe
2. angovo manokana avo lenta
3. onja notapatapahina metallized PP film / PU izay miantoka ny ambany-tena-inductance, avo fahatapahana fanoherana sy avo azo itokisana.
4. CRE isan-karazany ny AC sivana capacitor nampiharina azo antoka sy azo antoka fehezin'ny teknolojia fanasitranana tena mahatonga an'ity andian-dahatsoratra ity dia mety indrindra ho an'ny mpanova herinaratra amin'ny traction, fiara, angovo azo havaozina, faritra fampitana herinaratra, herin'ny tambajotra, ary fampiharana UPS, sns.
AC filter (série AKMJ-PS)
Fitsapana Hafanana mando, Toetra tsy miovaova amin'ny Voltage voafantina.
CRE AC film capacitor dia afaka mitahiry tsara ny angovo azo havaozina, na dia ao anatin'ny tontolo miasa mafy aza.
Kapasitera sarimihetsika maina ho an'ny elektronika herinaratra
Ny kapasitor AKMJ-PS dia afaka mitahiry tsara ny angovo azo havaozina, na dia ao anatin'ny tontolo miasa mafy aza.
Advanced embedded PCB capacitor natao ho an'ny rafitra hery avo
Ny andian-dahatsoratra AKMJ-PS natao tamin'ny pin terminal, tendrombohitra amin'ny PCB board.Ampiasaina betsaka amin'ny fitaovana elektronika herinaratra ampiasaina amin'ny sivana AC.
Kapasitor sivana AC vaovao ho an'ny mpanova maoderina sy fampiharana UPS
Ny CRE dia mamokatra karazana capacitor dielectric film - manomboka amin'ny vahaolana capacitor avo lenta ho an'ny indostrian'ny indostria sy fiara, ka hatramin'ny capacitor sarimihetsika mahery vaika mifanaraka amin'ny fampiharana elektronika rehetra amin'ny alàlan'ny voltase mirefy 100V volts ka hatramin'ny 100 kV.
Tsara kalitao AC sarimihetsika hery capacitor
1: fonosana kasety Mylar, voaisy tombo-kase amin'ny resin;
2: Varahina voanjo mitarika, habe kely, mora fametrahana;
3: Large fahafahana, kely habe;
4: fanoherana ny malefaka avo, miaraka amin'ny fanasitranana ny tenany;
5: High ripple current, avo dv / dt mahazaka fahaiza-manao.
Low-inductance AC kapasitor ho an'ny hery ambony traction maotera inverters
Ity capacitor andiany AKMJ-S ity dia ampiasaina hisintonana sy hitehirizana angovo rehefa ambony noho izay ilain'ny entana DC ny herin'ny AC, ary manome angovo ho an'ny entana rehefa ambany noho izay ilaina ny herin'ny AC.
Kapasitor sarimihetsika metaly ho an'ny sivana AC
AC kapasitor AKMJ-MT
Kapasitera sarimihetsika ho an'ny sivana AC miaraka amin'ny fizotran'ny fanasitranana tena, ny modely metaly manokana dia miantoka ny inductance ambany ary ny fahatokisana avo dia avo.
High voltage AC film capacitor misy tariby mitarika
AC film capacitor AKMJ-PS
1. Famolavolana vaovao
2. Raharaha matanjaka
3. Kapasitor sarimihetsika AC avo lenta amin'ny vidiny tsara
Kapasitor sarimihetsika AC namboarina manokana
Dingana telo AC sivana kapasitor （AKMJ-S）
Ny manasitrana tena, karazana maina, singa capacitor dia novokarina tamin'ny alàlan'ny fametahana manokana, onjam-peo vita amin'ny metaly PP film / PU izay miantoka ny inductance ambany, ny fanoherana avo lenta ary ny fahatokisana avo.Ny tampon'ny capacitor dia voaisy tombo-kase amin'ny epoxy mamono tena.Ny famolavolana manokana dia miantoka ny inductance tena ambany.Ny kapasitera sivana AC an'ny CRE dia malaza ampiasaina amin'ny traction amin'ny lalamby, tambajotra herinaratra, fitantanana kalitaon'ny herinaratra ary fampiharana UPS.
Karazana maina metalized sarimihetsika AC kapasitor amin'ny cylinderical rafitra
AC sivana kapasitor (AKMJ-MC)
Ny CRE dia namolavola karazana sarimihetsika maina AC sivana capacitor izay mahatohitra malefaka avo miaraka amin'ny fahaiza-manao fanasitranana.AC sivana capacitors dia natao manokana ho an'ny AC circuit.Malaza ampiasaina amin'ny vokatra elektronika herinaratra, UPS mahery vaika, inverter sns.